Ny tantara mitsangana ao amin'ny Instagram no ho zavatra lehibe manaraka anao | Famoronana an-tserasera
Instagram manandrana ny tantara mitsangana hiaraka indray
Manuel Ramirez | | Famolavolana tranonkala, Tambajotra sosialy
Tsy vao voalohany no nanandrana fanovana ifotony ny zavatra niainany ny Instagram. Tonga miaraka izao fitsapana hahatonga ny Tantara mitsangana. Izany hoe raha tokony ampandalovina amin'ny fihetsika amam-baravarana izy ireo dia ataovy amin'ny ambaratonga toy ny hoe miatrika horonan-taratasy mitsangana isika.
Avelantsika izy io amin'ny fitsapana, efa misy fotoana vitsivitsy izay nahafahan'ny Instagram nametraka fitsapana isam-paritra mba hahafahan'ny mpampiasa maro kokoa manandrana sy manombatombana azy ireo miaraka amin'ny valiny.
Ao amin'ny prototype nomen'ny Instagram tenany mihitsy, azonao atao ny mahita ny asa vaovao amin'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny Tantara mitsangana sasany. Izany hoe amin'ny «TikTok».
#Instagram miasa amin'ny Tantara Vertical?
Swipe ambony sy midina hijerena tantara. pic.twitter.com/LDJje8l137
- Alessandro Paluzzi (@ alex193a) Febroary 2, 2021
Azonao atao mazava tsara hoe iza no nahazo tsindrimandryTsy sambany koa izy nanahaka ny hafa toa izay nitranga tamin'ireo fotoana vitsy nampiasany ny Snapchat hampiditra ny endrika tsara indrindra nananany; iray amin'izany ny tantara mitovy amin'izany; na andramo andrana toy izao.
Ny mpamorona Alexander Puzzi dia nibolisatra ny kaody iray amin'ireo fanavaozana farany ny Instagram hahitana an'ity zava-baovao ity izay mety hahatratra ny kinova beta. Iray amin'ireo efijery an-trano efa niasa, antsoina hoe "splash", manazava azy amin'ny famakiana ny "Swipe down and up to explore the stories."
Instagram iray izay lasa mihasarotra hatrany ny mahafantatra ny fomba fikirakirana ny toetrany rehetra raha tamin'ny voalohany dia fampiharana tsotra kokoa ampiasaina. Azo takarina fa amin'ny fifaninanana ataon'ny hafa toy ny TikTok dia te hiteraka traikefa vaovao ianao hahazoana tombony bebe kokoa.
Una tamba-jotra sosialy dia matetika isika no mijery ny asan'ny mpanakanto maro eto dia asehonay anao ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Tambajotra sosialy » Instagram manandrana ny tantara mitsangana hiaraka indray